Alxanka Steel tuuboyinka Production Line, Roll Cold U samaynta Line - Teneng
Alaabooyinkayagu waxay leeyihiin tayo iyo sumcad wanaagsan si ay noogu oggolaadaan inaanu ka samayn karno xafiisyo fara badan iyo qaybiyayaal dalkeenna ah.
Waxaan ku adkeysaneynaa tayada badeecadaha waxaanan si adag u xakameyneynaa hababka wax soo saarka, oo ay ka go'an tahay soo saarista dhammaan noocyada.
Shirkaddu waxay ku takhasustay soo saaridda qalab wax-qabadkiisu sarreeyo, xoog farsamo oo xooggan, karti horumarineed oo xooggan, adeegyo farsamo oo wanaagsan.
Hadday tahay iibin ka hor ama ka dib iibinta, waxaan ku siin doonnaa adeegga ugu fiican si aan kuu ogeysiinno oo aan u isticmaalno alaabtayada si dhakhso leh.
Shijiazhuang Teneng Korontada & Farsamada Qalabka Co., Ltd. waa soo saaraha xirfadeed ee line-soo-saarka biibiile bir alxanka, duudduuban la xirrira la xirrira, line kala, jeexan-to-dhererka line iyo qalabka kaabayaasha la xiriira. Shirkadda Teneng waa shirkad casri ah oo awood u leh cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta. Teneng waa xubin golaha ah ee Ururka Samaynta Roll China, xubin madaxweyne ka ah Ururka Ganacsiga Tube Hebei Steel.
Mashiinnada Teneng waa qalabka wax -soo -saarka tuubada ugu waxtarka badan ee laga heli karo adduunka. Dalka Shiinaha, adeegsadayaasha caanka ah waa Hebei Jingye Group, SANY Group, Shirkadda Warshadaha Dhismaha Shiinaha